Uhlu Lwezakhiwo Ukuthengisa Nokuqasha eBrisbane
Ukuhlanza Amakhontrakthi in Brisbane
Ishicilelwe ngu ECO Cleaning Brisbane
I-Australia, ngokomthetho i-Commonwealth of Australia, iyizwe elizimele elihlanganisa izwekazi lase-Australia, isiqhingi saseTasmania, kanye neziqhingi eziningi ezincane. Yizwe elikhulu kunawo wonke e-Oceania kanye nezwe lesithupha ngobukhulu emhlabeni endaweni ephelele. Inani lezigidi ezingama-26 lisedolobheni kakhulu futhi ligxile kakhulu olwandle olusempumalanga. Inhlokodolobha yase-Australia yiCanberra, futhi idolobha layo elikhulu kakhulu yiSydney. Ezinye izindawo ezinkulu zedolobha elikhulu iMelbourne, iBrisbane, iPerth, ne-Adelaide. Abantu bomdabu base-Australia bahlala ezwenikazi iminyaka engaba ngu-65,000 ngaphambi kokufika kokuqala kwabahloli bamazwe baseDashi ekuqaleni kwekhulu le-17, abayiqamba ngokuthi yiNew Holland. Ngo-1770, ingxenye esempumalanga ye-Australia yafunwa yi-Great Britain futhi yaqala yaxazululwa ngokuthuthwa kwezijeziso eziya koloni laseNew South Wales kusukela ngomhlaka-26 Januwari 1788, usuku okwaba usuku lukazwelonke lwase-Australia. Inani labantu lakhula ngokuqinile emashumini eminyaka alandela, kwathi ngesikhathi se-1850s sokugijimisa igolide, iningi lezwekazi lase lihlolisisiwe futhi kwasungulwa amakoloni omqhele azimele amahlanu. Ngomhlaka 1 kuJanuwari 1901, amakoloni ayisithupha ahlangana, enza iCommonwealth of Australia. I-Australia selokhu yagcina uhlelo lwezombusazwe lwenkululeko yenkululeko olusebenza njengombusi wobumbano kumthethosisekelo wezwe, ohlanganisa izifunda eziyisithupha nezindawo eziyishumi. I-Australia iyizwekazi elidala kunawo wonke, elihlala licabalele, futhi lome kakhulu, elinomhlabathi omncane ovundile. Ine-landmass yamakhilomitha-skwele angama-7,617,930 (2,941,300 sq mi). Izwe eliwumgogodla, ubukhulu balo bukunikeza imihlobiso ehlukahlukene, enezingwadule enkabeni, amahlathi emvula asezindaweni ezishisayo enyakatho-mpumalanga, nezintaba eziseningizimu-mpumalanga. Ubuningi babemi bakhona, izakhamuzi ezi-2.8 ngekhilomitha ngayinye, zihlala ziphakathi kwabaphansi kakhulu emhlabeni. I-Australia ikhiqiza imali engenayo evela emithonjeni ehlukahlukene kubandakanya ukuthunyelwa kwamanye amazwe okuhlobene nezimayini, ezokuxhumana ngocingo, ukukhiqiza amabhange, ukukhiqiza kanye nemfundo yamazwe omhlaba.I-Australia yizwe elithuthuke kakhulu, elinomnotho we-14 ngobukhulu emhlabeni. Inomnotho onomholo ophakeme, onemali yeshumi ephezulu kunawo wonke emhlabeni. Amandla wesifunda futhi anenkcitho yezempi ebangeni leshumi nantathu emhlabeni. I-Australia inesibalo sabafokazi esikhulukazi emhlabeni, futhi abafuduki babalelwa kuma-29% abantu. Njengoba inenkomba yesithathu yokuphakama kwabantu yokuqhakambisa futhi nentando yeningi ebekwe endaweni yesishiyagalombili emhlabeni jikelele, izwe liklelinye izinga lezempilo, ezempilo, ezemfundo, inkululeko yezomnotho, inkululeko yomphakathi namalungelo ezepolitiki, nawo wonke amadolobha amakhulu ahamba kahle ekuqhathaniselweni komhlaba wonke. izinhlolovo zokuphila. I-Australia iyilungu le-United Nations, i-G20, i-Commonwealth of Nations, i-ANZUS, i-Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), i-World Trade Organisation, i-Asia-Pacific Economic Cooperation, i-Pacific Islands Forum, kanye ne-ASEAN Plus Six mechanism.